Ulaagaan adda baasnee namni irraa hambifnu hin jiru - Biiroo Haqaa Oromiyaa - BBC News Afaan Oromoo
Dhimma hidhamtoota akkaataa murtee koree hoji raawwachiiftuu ADWUI'n gadi dhiifamanii irratti ibsa kan kennan Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa Obbo Geetachew Ambaayee, mootummaan federaalaa hidhamtoota ulaagaa kaa'ame guutan 115 gadi dhiisuuf murteessuu isaa beeksisanii jiru.
Mootummaan naannoo Uummattoota Kibbaa hidhamtoota 400 himata isaanii adda kutee gadi dhiisuuf murteessuu kan himan Obbo Geetachew, kan naannolee biroo murtee mootummaan naannoo murteessuun raawwatama jedhan.
"Galmee qulqulleessuun eegalamee jira, hanga Amajjii 12'tti qulqullaa'ee ni dhumata jennee yaadna," kan jedhan itti gaafatamaan koomunikeeshinii Biiroo Haqaa Oromiyaa Obbo Taayyee Danda'aa, akka naannoo Oromiyaatti ulaagaa addaa baasnee namni irraa hambifnu hin jiru jechuun BBC'tti himaniiru.
"Siyaasa jedhamee yakki hin jiru waan ta'ef, sababni isaa siyaasa ta'ee yakka shororkeessummaas ta'e heera mootummaa humnaan diiguu dabalatee yakka kamiinuu warreen himataman ulaagaa malee gadhiisuuf qajeelfamni kaa'amee jira," jedhan Obbo Taayyeen.
Haa ta'u namootni dhunfaan nama ajjeesan yookan qaama namaa irraan miidhaa qaqqabsiisan kana keessa gadi dhiifamanii rakkoon biraa akka hin uumamne of-eeggannoon ni taasifama jedhan.
Naannoon Amaaraas koree dhaabee hojjetaa akka jiru itti gaafatamaan komunikeeshinii biiroo haqaa naannichaa Obbo Maaruu Chakkol BBC'tti himanii jiru.
Naannichi ulaagaa mootummaan federaalaa kaa'ee hordofee galmee hidhamtootaa erga qulqulleessee booda namoota hiikaman ifa godha jedhan.
Hanga ammaatti maaliif galmeen hidhamtoota hin qulqulloofne gaaffii jedhuuf deebii yoo kennan, qajeelfamichi dhiyootti isaan dhaqqabuu eeruun, naannoon Kibbaa qajeelfamichi dursee yoo isaan gahee malee galmee hidhamtootaa qulqulleessuun yeroo barbaada jedhan.